Nnwom 8 NA-TWI - Mateo 8 MTDS | Biblica América Latina
Nnwom 8 NA-TWI - Mateo 8 MTDS
Ɔbɔadeɛ ne abɔde anuonyam
1O Awurade, yɛn Awurade, wo kɛseyɛ ada adi wiase mmaa nyinaa. Nkamfo a wɔkamfo wo no du soro. 2 Mmofra ne nkokoaa kamfo wo. Woasiesie wo ho ama w’atamfo nyinaa; wusiw obiara a otia wo no kwan.
3 Sɛ mehwɛ soro a wo ara woabɔ, ne sɛnea woatoto ɔsram ne nsoromma pɛpɛɛpɛ wɔ wɔn afa a, 4 ɔdasani ne hena a wokae no, na onipa ba nso ne hena a w’ani ku ne ho!
5 Na wobɔɔ no ɔketewa sen abɔfo, bɔɔ no anuonyam ne nidi abotiri.
6 Na wode no sii ade biara a wobɔe so panyin; wode no sii abɔde nyinaa so panyin 7 a nguan ne anantwi ne wuram mmoa, 8 wim nnomaa ne ɛpo mu mpataa ne emu abɔde ka ho.
9 O Awurade, yɛn Awurade, wohu wo kɛseyɛ wɔ wiase mmaa nyinaa.
NA-TWI : Nnwom 8